Nahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2015 18:22 GMT
Vakio amin'ny teny Español, bahasa Indonesia, English
Mitaky ny fametraham-pialan'ny Praiminisitra Malayziana Najib Razak ny Bersih 4. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Bersih 4
Vahoaka tombanana ho 100.000 teo no nitangorona tao an-drenivohitra Malayziana, Kuala Lumpur tamin'ny faran'ny herinandro mba hanohana ny Bersih 4, hetsika ara-politika mitaky ny fametraham-pialan'ny praiminisitra Najib Abdul Razak, izay voarohirohy amin'ny raharaha kolikoly.
Nokarakaraina ny Bersih, midika hoe “madio” amin'ny fiteny Bahasa ao an-toerana hanosehana ho amin'ny ny fifidianana fanavaozana tamin'ny taona 2007, 2011 ary 2012. Saingy tamin'ity taona ity ny Bersih 4 dia mitaky ny fanesorana an'i Najib, voampanga ho nandray famatsiam-bola maloto tamin'ny 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), orinasa fampiasam-bola tantanin'ny fanjakana ihany koa. Niaiky i Najib fa nahazo vola 2.6 lavitrisa ringgit (675 tapitrisa dolara amerikana) izy, saingy nilaza izy fa fanomezana hoan'ny fifidianana avy amin'ny firenena namana iray Afovoany-Atsinanana hoan'ny antoko politikany izany.
Naharitra efa ho 2 andro (34 ora raha ny marina kokoa ) ny Bersih tamin'ity taona ity ary nifanojo tamin'ny fankalazan'ny firenena ny Merdeka, fahaleovantenan'i Malezia ny fiafarany. Nandritra ny andro voalohan'ny Bersih, nilaza ny polisy fa vahoaka 25.000 no tao Kuala Lumpur ary teo amin'ny 5000 no tao amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Tamin'ny andro faharoa, niakatra 35000 ny isan'ireo mpanao fihetsiketsehana tao an-drenivohitra ny tolakandro, saingy nitombo efa ho ny 100.000 izany nandritra ny ora faran'ny fotoana, araka ny tatitra sasany tamin'ny haino aman-jery. Mbola tsy tonga ny tarehimarika ofisialy tamin'ny fotoana nanoratana.
Notohanan'ireo hetsi-piraisankina tao amin'ny tanàna 70 manerana izao tontolo izao ihany koa ny Bersih 4.
Mahatalanjona ny isan'ny olona nanatevin-daharana ny Bersih 4 noho izy nambaran'ny governemanta fa tsy ara-dalàna. Nisy koa didy navoaka vao haingana izay nanameloka ny fitondrana t-shirt Bersih 4 miloko mavo.
Tsy noraharahian’ i Najib ny fihetsiketsehana Bersih ary nilaza izy fa mbola manohana azy ny ankamaroan'ny Maleziana. Mba hanoherana ny Bersih, nampanantena hanetsika “akanjo mena” iray tapitrisa ireo mpanohana an'i Najib amin'ny 10 Oktobra.
Mampiseho ny zava-misy tamin'ny fihetsiketsehana tao afovoan-tanànan'i Kuala Lumpur ity lahatsary ity:
Mampiseho ireo vahoakan'ny Bersih 4 nandritra ny ora faran'ny fotoana kosa ity lahatsary ity :
Anisan'ireo nanatevin-daharana ny Bersih ny Praiminisitra teo aloha Mahathir Mohamad, izay nitondra an'i Malezia nandritra ny 22 taona. Maro ireo gaga raha nahita an'i Mahathir satria nanohitra ny fanaovana fihetsiketsehana izy nandritra ny fitondrany, saingy nankasitraka ny fahatongavan'ity praiminisitra niasa ela tao amin'ny firenena ity ny sasany tamin'ireo mpikarakara. Nilaza i Mahathir fa manohana ny fitakiana fametraham-pialan'i Najib izy.
Ireto ambany ireto ny sasany tamin'ireo sary #Bersih4 nozaraina tao amin'ny Twitter:
Toy izao ny tamin'ny #Bersih4: Vahoaka nandritra ny tolakandro. Tratry ny Merdeka
Ranomasina mavo ao afovoan-tanànan'i Kuala Lumpur, rehefa ho alina ny andro tamin'ny andro faharoan'ny fihetsiketsehana
Ho an'ireo mahery fo amin'ny tolona, miarahaba anareo aho.
Tsy olo-malaza ao amin'ny #Bersih4 ny Praiminisitra
Manan-tantara, mbola tsy nahita zavatra tahaka izao aho. Rakyat no tena mahery fo!! Turun & sokong!!
‘Faniriana mafy ho an'ny fiovana’
Marobe ireo fanehoan-kevitra tamin'ny Bersih 4. Iray tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny Bersih i Wong Chin Huat izay natory teny an-dalana nandritra ny faran'ny herinandro:
Natory teny amin'ny sisin-dalana tao Jalan Tuanku Abdul Rahman aho tamin'ny alina. Tahaka ny toby fialokalofana feno olona izany -izay manao ilay t-shirt Bersih 4 mavo tsy ara-dalàna avokoa ny ankamaroanay- tsy eny an-tsisin-dalana ihany no matory fa eny ampovoan'ny arabe ihany koa. Mitondra harona fatoriana ny sasany; ny sasany nampiasa gazety hatoriana, ny hafa kosa matory amin'ny tany.
Nahoana no mahafoy ny fandrianany izy ireo? Ny ankamaroan'izy ireo tahaka ahy dia efa nanofa hotely mba hialana sasatra, saingy nisafidy ny hatory eny an-dalana izahay mba hanehoana ny fanirianay hoan'ny fiovana.
Nanoratra tao amin'ny tranokalam-baovao Malaysia Kini, niampanga an'i Najib ho miantso ireo mpandray anjaran'ny Bersih ho tsy tia tanindrazana i Dharm Navaratnam :
Azo sokajiana fotsiny ho mampahery ny fahitana ireo Maleziana marobe mitsangana ho an'izay inoan'izy ireo. Namaky ny vaovao androany, hadalana tanteraka ny filazan'ny praiminisitra fa tsy tia tanindrazana ireo izay namonjy ny fihetsiketsehana. Ny antony dia SATRIA tianay ny firenena matoa izahay nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana
Nilaza i Visithra Manikam fa olona maro no tokony hamonjy ny Bersih raha tsy notontosaina andro mialohan'ny Merdeka izany:
Mitehaka ireo namonjy ny Bersih 4 aho. Toy ny fampisehoana izany. Tena faly aho nahita ny sasany taminareo nilanja saina. Sambany nandray anjara tamin'ny zavatra mahakasika ny firenena ny ankamaroanareo. Mankasitraka ireo izay natory teny an-dalambe tamin'ny alina aho. Tena manan-tantara izany. Saingy indrisy, tsy ampy ny fotoana
Nandrisika ireo mpanohana ny Bersih i Neil Khor mba hijery bebe kokoa ireo olana andavanandron'ny mahantra, indrindra ireo izay monina ao amin'ny faritra ambanivohitra:
noho ny tsy fahombiazana nanentana ny ambanivohitra – noho ny tsy fahafahana nanentana na dia ireo olona tsy lavitry ny ambanivohitra mba handray anjara – tsy nahavita nanentana ny vahoaka manontolo ny ahiahin'ny Bersih izay matetika ara-poto-kevitra fa tsy olan'ny mofo sy dibera -nandamoka tamin'ny fanentanana ny sarambambem-bahoaka
Fihetsiketsehana Bersih 4 tao Kuala Lumpur. Sary tao amin'ny pejy Facebook-n'ny Bersih 4
Mamariparitra ny fiantraika ara-politika ny Bersih 4 ity lahatsoratra avy amin'ny tranokalam-baovao Ant Daily ity:
Tao anatin'ny 34 ora, nivoatra niainga tamin'ny hetsika nokarakarain'ny vondrona Maleziana iray miezaka hitondra fanovana ao amin'ny firenena ka lasa zavatra hafa tanteraka ny Bersih 4.
Fanararaotra hoan'ny Malaiziana tsotra – ny rakyat – izany mba hanomezana azy herim-po hanofinofy, na inona na inona vokany.
Ho an'ny maro, zavatra nanome herim-po ho azy ireo mba hanofinofy ny Bersih 4. Mba ahafantarana fa azo atao tokoa ny mampisy Malayzia marina sy ara-drariny. Rehefa misy ny firindrana sy ny filaminana, ny fifankahazoana sy ny fiantrana, ny firenena izay tsy mila matahotra na miankohoka amin'ireo manararao-pahefana ho amin'ny tombotsoany manokana intsony ny rakyat.